Zvizoro Kuzadza Machine - Micvd.com
Munyika yedu inomhanya-mhanya, zvigadzirwa zvitsva zviri kukunda musika zuva nezuva. Zvinonhuhwirira, cremes, gels, mascara uye miromo gloss. Iwo ekuzadza nekuisa chisimbiso michina kubva NPACK master izvi zvakasiyana.
Cosmetic mafuta, bvudzi bvudzi, lotions, mazino, zvikwiriso, kana muviri mafuta. isu tinopa mhinduro kuti chengetedza chero mhando ye cosmetic chigadzirwa mune chero mhando yemidziyo
Zvekurongedza zvipuka zvinodikanwa zvinogona kusiana zvakanyanya saka tinopa akati wandei maphaketi ekugadzirisa ezvinwiwa uye zvikafu zvechipfuva. Isu tichagovera iyo yakakodzera cosmetic zvishandiso kune zvaunoda kana iri pistoni kana auger muchina. Iwe unogona kuwana yakakwira-yemhando yepamusoro yekuzadza machira ekuzadza mbiya, sachets, zvipikiri zvekuputika mabhodhoro, maketi kits kana chero chinhu.
Zvigadzirwa zvacho zvakangosiyana-siyana sekurongedzwa kwavanouya. Kune media kana viscous media, tinopa hunyanzvi hwekugadzira uye tinosangana nematambudziko ari kuuya nemazano matsva nekuvandudza kwehunyanzvi. Izvi zvinoguma mutsetse uzere wezvigadzirwa zvatinopa nhasi. Iyo inotangira kubva ku dosing, kuzadza nekuisa chisimbiso kune iyo gungano rezvakaomeswa zvekurongedza masisitimu, zvinosanganisira Turnkey mhinduro.
Mishini yedu ndiyo mhinduro kwayo yekuzadza zvigadzirwa zvezvemhando yepamusoro sezvakangoita uye zvakaomarara zvemidziyo. Mishini isu yatinopa kuzadza zvigadzirwa zvevashandi zviri nyore kuchenesa, kushandisika, kukurumidza, uye pamusoro pezvose zvakagadzirwa zvinoshandiswa kugadzira chero rudzi rwechigadzirwa chezvemhando yepamusoro. Kubva pakuzadza, cging, uye kunyorera: zvishandiso zvedu zvinoramba zvichisangana neiyo inogara ichidikanwa cosmetic uye yekuchengeta wega indasitiri.
Sezvo indasitiri yezvishandiso ichichinja nekukurumidza, isu tinoshanda nesimba kugadzira zvigadzirwa zvehombodo izvo zvinokwanisa kugara mumidziyo yemhando dzakasiyana siyana uye hukuru. Ivo zvakare vanokwanisa kubata zvigadzirwa zvine huwandu hwakasiyana hwekuziva. Pasinei hapo nekuenderana kweichi chigadzirwa chako, tichawana mhinduro yakafanira kwauri.
Isa A Yakazara Zvekuzadza Zadhiza Midziyo System
Zvigadzirwa zveo cosmetic zvine mazinga akasiyana emagetsi ekuona, ndosaka iwe uchifanira kuve neshuwa kuti iwe unogadzirisa iyo chaiyo mvura yekuzadza michina munzvimbo yako kuti uwane mhinduro dzaunoda. Kufashukira mafirita, piston mafirita, mafirita mafirita, uye girafu mafirimu ari kuwanikwa zvichienderana ne viscosity. Kunyangwe iwe uine musangano wegehena, maoiri, maoiri, maepisi, kana mamwe marudzi ezvizorwa zvemafuta, tine zvigadzirwa zvekuzodza zvekupoda zvinogona kubata zvigadzirwa izvi uye zvinoita kuti mutsara wako wekugadzira urambe uchifamba mushe.
Kutevera nzira yekuzadza mvura, dzimwe mhando dzemidziyo inogona kuchengetedza hunyanzvi hwekurongedza maitiro munzira yese kusvika pakupera. Midziyo yekukopa inokwanisa kuisa macircuit emhando dzakasiyana nehukuru kune hwakawanda wemidziyo, vashandi vanokwanisa kuisa marekodhi emhando yepamusoro neyemagirafu echinyorwa uye zvinyorwa, uye vatakuri vanogona kutumira zvigadzirwa kumhanya dzakasiyana pakati pezviteshi.
Gadzira Mutsetse Wechigadzirwa Chekugadzira Zvizorwa
Kusangana nezvinodiwa zvechishandiso chako, tinogona kukubatsira kuti ugadzire maitiro akagadziriswa emagetsi ekuzora zvishandiso. Sarudza kubva pamazizi akasiyana uye magadzirisheni ekukwenenzvera mvura yekupakata maitiro, nerubatsiro kubva kune mumwe weedu nyanzvi yekurongedza. Tinogona zvakare kukubatsira iwe kuisa yako yakasarudzika mvura yekuzadza mutsara uye kuyedza iyo kuti ive nechokwadi chekuti inokwanisa kukupa izvo zvaunoda kuona.
Kana iwe uchida kutanga pane dhizaini uye kugadzirisa kwetsika cosmetic yekuzadza michina, taura nemumwe wevashandi vane ruzivo kune NPACK. Tinogona kubatsira kuve nechokwadi kuti yako yekugadzira mutsetse inopa makore ese akasarudzika-emhando yepamusoro yebasa, ine mikana njodzi yekukanganisa michina nyaya. Pamwe chete nemidziyo yakavimbika yekuzadza mvura, isu tinopawo mamwe mabasa anosanganisira kuisa, kubiridzira, uye basa remumunda. Isu tinopawo akakwira anomhanyisa kamera masevhisi, ayo anogona kupa kutarisisa kwekutarisa mashandiro uye kubatsira kuona kuti ndeapi matanho aunotora kuti uvandudze mashandiro emishini yako.
Shampoo & Cream & Mafuta Kuzadza Machine
Iyo NP-VF otomatiki shampoo yekuzadza muchina yakanyatsogadzirwa uye inogadzirwa neshanghai npack michina michina co., ltd. Inonyanya kunyorera yekuzadza viscous mvura, senge zvigadzirwa zvekuzora, zvigadzirwa zvemazuva ese zvemakemikari, senge shambuu, kirimu, mafuta uye nezvimwe.
Iyo tangi yepamusoro yemvura inokwanisa kubatana neyevatengi yakawanda yekuchengetedza tank kuti isvike otomatiki ekudzivirira mvura.
Kuendeswa kwechigadzirwa kubva kune yako yakawanda tangi kuenda kumapistoni kunogona kurongedzwa neye buffer tangi uchishandisa danho-inonzwa kuhukura, manifold neakananga dhizaini, kana nzira yekudzokorora.
Iyo NP-VF otomatiki pneumatic piston kuzadza muchina inogadzirwa neiyo 304 SS chimiro uye inokwanisa kutsigira 1 kusvika ku20 kuzadza mamazizi. PLC Mabhiza, touch screen, chikafu giredhi yekudyidzana zvikamu, isimbi isina tsvina uye anodized aluminium kuvaka, pamwe nezvimwe zvinhu zvakawanda zvinouya zvakajairwa.
304 Kuvakwa kwesimbi.
Izvo zvemvura zvinosangana zvikamu ndeye 316L simbi isina tsvina
Zvose zvekubatana zvinogona kuva Teflon, Vinton uye hoses pane zvamunoda.
Shandura nyika inozivikanwa maComplate Brand akadai saNokia, Schneider, uye Panasonic
mokugezera 2 4 6 8 10 12 16
Vhoriyumu (ml) 10-30ml 30-100ml
simba 220V 50 / 60hz
NP-VF otomatiki shampoo yekuzadza mushini
Dhizai mazai pasi pasi mukuzadzwa kwezvinhu zvinopisa mhepo kana zvichidikanwa
Muromo webhodhoro unogona kuwanikwa.
ViscXNUMX Liquid Kuzadza Machine
Iyo NP-VF-1 otomatiki viscosity Liquid yekuzadza muchina yakagadzirirwa uye yakagadzirwa chigadziko paNP-VF, Iyo inonyanya kunyorera kuzadza viscous fluid, senge zvigadzirwa zvezimonyo, zvigadzirwa zvemakemikari zvemazuva ese.
Kutyairwa ne general servo mota
Shongedza Panasonic servo mota yekutyaira iyo piston stroke.
NP-VF-1 otomatiki Viscosity mvura yekuzadza muchina
Nyore kugadzirisa huwandu hwekuzadza, otomatiki chinja nechinobata screen, kunyatso kukwira uye yakagadzikana Speed.
Linear mhando yekuzadza system iri nyore kugadzirisa kune akawanda akasiyana emabhodhoro
NP-EVF Ehupfumi Hokuzvimiririra Liquid Kuzadza Machine
Iyo NP-EVF Ehupfumi otomatiki yekuzadza mvura muchina ndeye dhizaini pane iyo NP-VF, iri zvakare rakanyatso shanduka firimu rinogona kuzadza nenzira kwayo uye nekukurumidza kutetepa uye kwepakati viscosity zvinwiwa.
The NPACK otomatiki mutsara piston filler inogadzirwa ine 304 isina tsvina simbi uye inokwanisa kutsigira 2 kusvika ku4 zadza maNzzles PLC Controls, kubata screen, chikafu chegiredhi yekubata zvikamu, isimbi isina tsvina uye anodized aluminium kuvaka, pamwe nezvimwe zvakawanda zvinouya zvakajairwa.
Iyo inowedzera kushanda kune chero mutsetse wekugadzira unoshandiswa mu cosmetic, chikafu indasitiri, hunyanzvi hwemakemikari, mishonga yemishonga, uye maindasitiri ekuchengetedza munhu. Dzimwezve sarudzo dziripo dzenzvimbo dzehutsanana, dzinotyisa, dzinopisa uye dzinotenderera
304 Kuvakwa kwechinhu chisina mbiru, uye iyo inoshandiswa inogadzirisa midziyo iyi inonzi 316L inosimba isina tsvina
Hapana bhodhoro, kwete kuzadza, PLC control
Kuzadza kwakavharwa mazai madonhwe madonhesi, siriki, uye motokisi inogadzirisa mvura yakachena
Yakarurama kuzadza ivhu, mukati me ± 1% uye yose yekamboro yekabhokisi.
Bhodhoro muromo unogona kuwanikwa
Zvinyorwa zvekuvaka: 304SS
Nhamba dzekuzadza mazizi: 2-inozadza mazizi
Simba rakati: 220V, 50 / 60HZ, chikamu chimwe chete kana 380V, 50 / 60Hz
Kuyera uye kuyerwa: pasi pekuenzaniswa kwekuenzanisa uye makambani ekushandisa
1 havukavu 10-30bottles / min
2 Kuzadza bhora 100-1000ml,350-2500ml,500-5000ml
3 Chiyero chakarurama ± 1%
4 Simba rekushanda 220VAC
5 Air pressure 6 ~ 8㎏ / ㎝²
6 Air use 1m³ / min
8 Zvimwe zvishandiso simba rekuita 7.5kw （air compressor）
9 Net uremu 320Kg